On the Rebound - Ko kufambidzana paIndaneti nzira yakarurama kuenda?
Last updated: Chivabvu. 17 2019 | 1
Kana uchangobva vagura kurambana, ndiko kufambidzana paIndaneti nzira yakarurama rebound? Kutanga ari kufambidzana nyika pashure ukama dzimwe nguva hazvisi nyore. Kuva pamusoro rebound ihukutu, asi mazano aya pano kuti akachengetedzeka!
Handirevi kukanda zvose pamusoro ukama hwako zvekare, asi wedzerai paIndaneti profile ukama hwako kare. Vanhu vanoda kuziva kana uri vakarambana, akaparadzana, chirikadzi nezvimwewo. Vachiti zvakafanana, "Ini ndiri mutsva kuti paIndaneti kufambidzana nyika" riri kunaka kushandisa kana uri mutsva payo. Munhu wose aiva chitsva panguva imwe nguva!
Kufanana offline NO nyika, repaIndaneti kufambidzana nyika izere cheaters, nhema, nezvimwewo. Ngwarira paunenge kutarisa Profiles uye kuteerera mashoko. Kutanga panze uye kuva pamusoro rebound kungaita kuti imi muchiva nyore kuti munhu wose uyo achakupa hanya. Izvi zvingaita kuti dambudziko kana ukasangwarira.
Usapa zvose mashoko ako
Pane chikonzero paIndaneti kudanana mabasa kuchengeta zvinhu zvakawanda zvakavanzika. Building kuvimba munhu anotora nguva. Tora nguva kuziva mumwe munhu asati vanoziva nhamba yefoni yako nokuti unogona kuzvidemba paya.
Wakambofirwa Shamwari Tarisa Over Potentials
Kana uri zvechokwadi kufarira mumwe munhu, uye pamusoro rebound, bvunza shamwari yakanaka kana kusarudza uri kuita zvakanaka. Friends inogona noutsinye kutendeseka usati tinokanganisa zvikuru.
Apo Ko "Nguva Right" Kuti Tevera A New Ukama?